Balancing cricketing and endorsements easily doable: Virat Kohli – Sports News 9
Published: November 10, 2018 6:57:55 pm
အောက်စ်ဖို့ဒ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းမှာဖြစ်ကြောင်း မိုချန်ဂလာဘတ်နည်းပြ ပြောကြား – FOX Sports Asia
မိုချန်ဂလာဘတ်အသင်းရဲ့နည်းပြ ဒိုင်တာဟက်ကင်က သူတို့ အသင်းကို အငှားနဲ့ လာရောက် ကစားခဲ့ဘူးတဲ့ ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ လူငယ်နောက်ခံကစားသမား ရိစ်အောက်စ်ဖို့ဒ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အောက်စ်ဖို့ဒ်ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းမှ မိုချန်ဂလာဘတ်အသင်းကို အငှား နဲ့ လာရောက်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ ၀က်စ်ဟမ်း နည်းပြမိုယက်စ်က ဒုတိယရာသီဝက်ပွဲစဉ်တွေအတွက် ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ တန်းဆင်းဇုန်အတွင်းရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေမှာ အောက်စ်ဖို့ဒ်အနေနဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းအတွက် ပုံမှန်နေရာရဖို့လမ်းမမြင်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာပဲ မိုချန်ဂလာဘတ်အနေနဲ့ အောက်စ်ဖို့ဒ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် အလျင်အမြန် ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်။ မိုချန်ဂလာဘတ်နည်းပြ ဒိုင်တာဟက်ကင်က – “ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အောက်စ်ဖို့ဒ်က ဂျာမနီမှာပဲ ဆက်ကစားချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ့ စကားပြောနေ ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ခြေစွမ်းတိုးတက်လာဖို့အတွက် ဒီနေရာက အကောင်းဆုံးပါ။ […]
Playtime’s over. The little kids have gone home for their nuggets and chips and an early bedtime, leaving the big boys to play their big boy games. Let the 2018 NFL playoffs begin. There was plenty of high drama to close the regular season, with the Baltimore Ravens needingalast-ditch interception to seala[…]
The Italian had been in the job just four months …
VIDEO: Barcelona star Lionel Messi shows off fancy footwork… on the dance floor – Goal.com
The Barcelona superstar is known for his dazzling foot skills …
Andrej KRAMARIC Goal – Russia v Croatia – MATCH 59
Total Video Views: 9354 Find out where to watch live: …
Donovan Mitchell’s Best Plays of the 2017-2018 NBA Regular Season
Total Video Views: 9832 Check out the best plays from …